Topnews:-Dowladda Somalia oo fashilantay-Uganda oo walwalsan iyo Ethiopia oo baxday!
18 March 2013 Waagacusub.com-Dowladda Madaxweyne Hassan Garguurte ayaa u muuqata inay wadadii fashilka cagta saartay kadib markii Ciidamadda xooga dalka Somalia iyo Saraakiisha Ciidamadda ku kaceen falal u dhigma gadood. Bakhaarkii ugu weynaa hubka Madaxtooyadda ayaa la jabsaday oo la waayay meel la geeyay iyo cidda laga iibiyay.
Saraakiishii Nabadsugida Dowladda Somalia ayaa xabsi lagu guray,waxaana la sheegay in Saraakiisha qeybaha Ciidamadda ka gadoodeen xilka qaadistii lagu sameeyay Taliyahii Ciidamadda xooga dalka Jeneral Diini iyo Abaanduulahii Ciidanka Jeneral Dhegabadan.
Labada Taliye waxay ahaayeen kuwii jebiyay Al-Shabaab waxaana xilka qaadistooda lagu sheegay ujeedo la doonayo in Al-Shabaab sii joogaan gudaha Somalia.
Ciidamadii Ethiopia ka joogay Gedo,Bay iyo Bakool ayaa guud ahaan ka baxay gudaha Somalia taasina waxay walaac xoogan gelisay Ciidamadda Uganda ee ka hoowlgala gudaha Muqdisho.
Beelaha Hawiye intooda badan ayaa shirar hoosaadyo ku leh Nairobi,Muqdisho iyo Galkacyo waxaana la filayaa inuu go-aankoodu noqdo qaadacaad ay ku shaacinayaan inay kalsoonida kala laabteen Dowladda Hassan Garguurte oo noqotay mid ay ku adeegtaan kooxda Dam Jadiid.
Qabiilada waxay ka arrinsanayaan sidii Madadaxda Dowladda loo bedeli karo,loona ilaali karo xasiloonida goboladda .
Dad aan waxba galabsan ayaa Xabsiyada lagu guray iyadoo la eryay shaqaalahii Madaxtooyadda iyo Wasaaradaha Qaranka.
Sida muuqata waxay Somalia dib u wajaheeysaa burburin dagaalo Sokeeye maadama Madaxweynaha ka dhigay awoodiisa ku tagrifal iyo eex ku dhisan koox jecleeysi iyo qabyaalad.
Somalia waxaa burburkeeda horseeday Cadaalad daro,qabyaalad iyo Kibir qooqa waana nasiib daro in afartan sano kadib xaalku sidii yahay wali.